नोबल अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दा आन्द्रा काटेको पिडितको आरोप ! - Sagarmatha Online News Portal
नोबल अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दा आन्द्रा काटेको पिडितको आरोप !
विराटनगर । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले कलेज परिसरमा मंगलबार नाराबाजी गरेका छन् ।
आइतबार पाठेघरको शल्यक्रियाका लागि नोबेलमा भर्ना हुनुभएकी सोलुखुम्बुको नोचासल्यान–४ की ३५ वर्षीया तारादेवी भट्टराईको मंगलबार विहान मृत्यु भएको थियो ।
महिलाको मृत्युपछि आफन्तले लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई कारवाही गर्न माग गर्दै मंगलबार दिनभर प्रदर्शन गरेका हुन् । मृतक महिलाका श्रीमान् ओम भट्टराईका अनुसार पीसीआर जाँचपछि सोमबार ताराको शल्यक्रिया गर्ने जानकारी अस्पतालले दिएको थियो । सोमबार बिहान डा.शान्ति सुवेदीको टिमले शल्यक्रिया गरेपछि उनलाई आइसियूमा राखिएको थियो ।
शल्यक्रियापछि श्रीमतीको अवस्था सामान्य रहेकोमा सोमबार साँझ पुनः अर्को शल्यक्रिया गर्नुपर्ने जानकारी अस्पतालले दिएको भट्टराईको भनाइ छ । त्यसपछि शल्यक्रिया गरेर उनलाई अचेत अवस्थामा अक्सिजनसहित शल्यक्रिया कक्षबाट निकालेर भेण्टिलेटरमा राखेकोमा मंगलबार बिहान मृत्यु भएको जानकारी अस्पतालले दिएको आफन्तको भनाइ छ ।
पाठेघरको शल्यक्रिया गर्दा आन्द्राको ट्यूमर देखिएको भन्दै चिकित्सकले पाठेघर र ट्यूमर फालेको बताएका थिए । तर, शल्यक्रियाअघि परीक्षण गर्दा ट्यूमर नदेखिएकोले घटना शंकास्पद रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।
ट्यूमर निकालेको भन्दै चिकित्सकले बिरामीको आन्द्रा काटिदिएको आफन्तको भनाइ छ । दिनभर श्रीमतिको अवस्था सामान्य भएको बताएका चिकित्सकले बेलुका रगत रोकिएन भन्दै शल्यक्रिया गर्न लिएर गएको श्रीमान ओमले बताउनुभयो । त्यसपछि श्रीमतिलाई अचेत अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राखिएको उहाँको भनाइ छ । ट्यूमर निकाल्ने भन्दै चिकित्सकले बिरामीको आन्द्रा काटिदिएकोले मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो ।
लापरवाही गर्नेलाई कारवाही नभएसम्म बिरामीको शव नउठाउने भट्टराईले बताउनुभएको छ । विरामीका आफन्तले नाराबाजी गरेपछि नोबेल प्रशासनले अस्पतार परिसरमा सुरक्षा चाहियो भन्दै प्रहरी बोलाएको थियो ।
अस्पतालको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लागेपनि नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कलेजका प्रबन्धक नारायण दाहालले घटनाका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहनुभएन ।